(Emelitere ikpeazụ On: 17/07/2020)
Rome bụ nnukwu obodo ịga leta na Europe maka ndị njem dị elu. Obodo ochie nke Rome, ọtụtụ nkiri, hotels, na ụlọ oriri na ọ areụ areụ zuru ezu maka ndị agadi na oche nkwagharị. Nke a pụtara na ụzọ akụkụ obodo niile nwere oghere dị warara, obodo ahụ dịkwa larịị, yabụ agbanyeghị mgbatị ahụ gị, Ọ ga-adịrị gị mfe ijegharị.
Ezie na Rome na-aka nke ọma jupụtara ke akwa oge, ma ọ bụrụ na ị na-eme njem-oge, na ọdịda, ọmụmaatụ, ga-enwe Rome naanị ihe niile gbasara gị. Na mgbakwunye, ọnụ ahịa ụlọ oriri na ọ hotelụ hotelụ na njem na-agbadakarị oge, Ọzọkwa, wonkwesighi ichegbu onwe gị banyere ịgbazite ụgbọ ala, n'ihi na ị ga - enwe ike iji ụgbọ okporo ụkwụ gaa Rome n'ụzọ ọ bụla na Europe. Ọ dịghị ihe dị mfe karịa ka ọ dị ụgbọ okporo ígwè njem n'ime ụgbọ elu Trenitalia nke dị elu na ụgbọ elu ọgbara ọhụrụ. Na mgbakwunye na nkasi obi na nnukwu ụgbọ oloko, ị nwere ike ịnụ ụtọ ego pụrụ iche na tiketi ụgbọ elu maka ndị okenye.
'The nri abalị ikpeazụ' Duomo na Leonardo De Vinci mere Milan ka ọ bụrụ paradaịs maka ndị na-ahụ maka nka na ndị hụrụ akụkọ ihe mere eme. Ghara ịbụ ihe owuwu ụlọ, Milan nwere ezigbo enyi na ndị njem, ọ nwetakwala a 2016 Nweta onyinye nturu ugo EU. N'ihi ya Milan bụ otu n'ime obodo kachasị mma ịga na Europe maka ndị njem dị elu.
Ọ bụrụ na ịgafe afọ 60 gị ma kwadebe maka ibi ndụ mara mma, mgbe ahụ ị ga - enwe oge dị ịtụnanya na Milan. The Italian nri, na pụtara ije nke Basilicas, art veranda, na ngosi ihe mgbe ochie ga - eme gi ka obi di eze. Mgbe ọ nọ na Milano, should kwesịrị ị na-esonyere klas nri nri pasita n'ihi na ọ naghị egbu oge ịmụta ihe onyinye ihe ọastaụ perfectụ pasta zuru oke ka ị wee nwee ike meghachite la dolce vita n'ụlọ.
Traingbọ okporo ígwè na Bruges dị nso 10-20 nkeji’ si n’etiti obodo na-aga, yabụ ị nwere ike ịga ebe ọ bụla na Belgium na UK.
Ezumike ezumike na Baden-Baden bụ nhọrọ ezumike zuru oke maka ndị njem dị elu na Europe. Ighalo nwayọ, ọgwụgwọ mineral na apịtị spa, ọmarịcha ubi dị ka Igwu, mehe iphe dụ ẹji. Otú ọ dị, ma ọ bụrụ na ị hụrụ n'anya na-arụsi ọrụ ike na ezumike, mgbe ahụ enwere klọlfị golf na klọb egwuregwu Baden-Baden n'ihi na ị na-eleta.
Ị chọrọ Embed anyị blog post “7 Obodo kacha mma na Europe iji gaa maka ndị njem bịara njem” na na gị na saịtị? Ị nwere ike ma na-ewe anyị foto na ederede na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://embed.ly/code?url = https://www.saveatrain.com/blog/europe-visit-senior-travelers/ የሰማይ አካላት- (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)